डा.गोविन्द केसीले सुरु गरे इलाममा १६ औं अनशन
इलाम । डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
बुधबार ४ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन गरी उनले ५ बजेबाट अनशन सुरु भएको जानकारी गराए । उनले ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले इलाम सदरमुकामको फुलगाछी स्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको पुरानो कार्यालयमा अनशन सुरु गरेका हुन् ।
१५ औं अनशन तोड्ने सिलसिलामा सरकारसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको प्रतिबद्धता विस्तारै माफियाहरुको घेरवन्दीमा परेर कठोर बन्दै प्रबिद्धताबाट पछि हटेको उनले बताए ।
उनले सरकार र सत्ताका दलहरु तीन करोड जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा नभइ मुठीभरका मतियारको पक्षमा देखिएको उनले पत्रकार सम्मेलमा बताए ।
समितिले सहमित विपरित विधेयक पास गर्ने संकेत पाए लगत्तै डा. केसी इलाम पुगेका थिए ।
१६ औं सत्याग्रहका मागहरुः
२. गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।
त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
३. सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्